'ငါးကိုကြည့်ပါ' - SHEFFIELD ကျောင်းသားများ CORA PEARL သူတို့၏တီးဝိုင်းနာမည်၊ အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် GRAFFITI တေးသံသစ်ပေါ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ - သတင်း
'ငါးကိုကြည့်ပါ' - Sheffield ကျောင်းသားများ Cora Pearl ကိုသူတို့၏တီးဝိုင်းနာမည်၊ အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ညှိထားသော Graffiti အသစ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
Sheffield ဂစ်တာလေး Cora Pearl ကိုအခြေခံသည့်ဂစ်တာသည်ဒေသခံမြင်ကွင်းတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုရှိသည်ဟုပြောခြင်းသည်ဘေးကင်းနိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Heavy Lids တွေလိုပဲတီးဝိုင်းဟာ Sheffield Uni မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာအရင်ဖျော်ဖြေပွဲတော်တော်များများကိုထုပ်ပိုးထားပြီး We Are Scientists ကိုထောက်ခံပါတယ်။
Will McMahon (ဦး ဆောင်ဂစ်တာ)၊ Jack Hardwick (အသံ၊ ဂစ်တာနှင့်တံပိုး) နှင့် Luke Hawtin (ဘေ့စ်) တို့သည်သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံ၊ Cora Pearl နောက်ကွယ်ရှိအဓိပ္ပာယ်နှင့်လာမည့်လများအတွက်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ဘယ်လို Cora ပုလဲအတူတူလာခဲ့တာလဲ
ဂျက်: ဒါဟာအတော်လေးလိုက်တယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမနှစ်တွင်ငါကစားသောတစ်ကိုယ်တော်ကွင်းနင်းအစုကိုရရှိခဲ့ပြီးထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏အဖော်ဖြစ်သူ Dig Deep လုပ်နေခဲ့သည်။ သူတို့ကဆရာ ၀ န်၏အမိန့်များမှာဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်လို့သူကကစားခိုင်းတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ဂစ်တာတီးပြီးကျွန်တော်အရင်ကကစားခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီပွဲမှာငါတို့စကားပြောနေကြတယ်။ ကျနော်တို့အတူတူ jamming စတင်ကျနော်တို့ (ဒရမ်သမား) ဂျွန်ဝင်, ပြီးတော့ဂျွန်ဗုံသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်လုကာအပြန်အလှန်မိတ်ဆွေများကတဆင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
လုကာ ဖြေ။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျွန်တော်ပါ ၀ င်ခဲ့ပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်တုန်းက Dig Deep Gig မှာလည်းရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါတယ်။
ဂျက် : သူယခုဤနေရာတွင်မဟုတ်သောကြောင့် apt သောယောဟန်မှလွဲ။ ။
လုကာ ဖြေ။ ။ နာမည်ကြီးအောင်ကြိုးစားမှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါငါပါ ၀ င်တာဝမ်းသာမိတယ်။
အလိုတော် : နစ်ခ် O'Malley လိုပဲ။
Cora Pearl ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမင်းဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ
ဂျက် တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်း။ ဒါဟာငါ့အကြီးမြတ် - အဖွားရဲ့ deathbed အပေါ်ထွက်လာ၏။ ကျွန်ုပ်သည် Cora Pearl နှင့်ဆက်နွယ်နေသောနက်ရှိုင်းသောမှောင်မိုက်သောမိသားစု၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏အဘွားကြီး၏။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသုတေသနအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သူဟာပဲရစ်မှာရှိတဲ့ခရစ္စတီယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတကယ်ချမ်းသာပြီးကျော်ကြားသူဖြစ်တယ်။
ဂျက် : သူမသည်ငါ့မိသားစု၏ဘက်ခြမ်းကနေဘယ်မှာဖြစ်သော Plymouth တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး, သွားနှင့်အချမ်းသာဆုံးလူသိများလူများ၏တ ဦး တည်းဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့သည်။
ဂျက် သူမမျက်နှာသာရချင်တဲ့သူတွေဆီကနေလူနေမှုဘ ၀ ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူမသည်ဆံပင်ကိုပန်းရောင်ဖြင့်ဆေးခဲ့သည့်ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့ထင်မြင်ချက်အရသူမဟာအစောပိုင်းအမျိုးသမီးရေးရာပုံသက်သေကောင်းတစ်ခုပါ။
အလိုတော် ဟုတ်တယ်၊ ဒီအမျိုးသမီးအေဂျင်စီ။
အဆိုပါ freakin Rican နှင့် Biggie ပေါလ် xavier
ဂျက် : ငါကဒီလူနဲ့ဆက်စပ်တယ်ဆိုတာသိရတာအရမ်းပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသမီးကိုသတိပြုမိစေရန်နာမည်ပေးခဲ့သည်။
လုကာ : သင် Cora Pearl ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလိင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးရေးရာနမူနာတစ်ခုပါ။ သူမအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးစားမှုသည်အခြားလိင်ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုနှင့်အမြတ်ထုတ်မှုစနစ်တွင်အောင်မြင်ရန်သူမ၏လိင်ကိုအသုံးချခြင်းမှရရှိသည်။ ကျနော်တို့ burlesque နှင့်ကြောင်း၏တပြင်လုံးကိုအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူ aligning ပါတယ်။
လုကာ : Will ရဲ့ရည်းစားတက္ကသိုလ် burlesque လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကpresident္ဌဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
အလိုတော် ဖြေ - သူနဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေကဖျော်ဖြေပွဲကနေငွေရှာဖို့မတတ်နိုင်ကြဘူး။ Folie de Lunes လို့ခေါ်တဲ့စုပေါင်းအဖွဲ့ကဖျက်သိမ်းလိုက်လို့သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်ဟာသူတို့ရဲ့ Spectre လို့ခေါ်တဲ့စုပေါင်းအဖွဲ့ကိုစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတို့နှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ထားသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်လည်းအလားတူကမ္ဘာ့အမြင်မျိုးရှိသည်။
ဂျက် ဖြေ - သူတို့ Instagram ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကတကယ့်ကိုလိင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့တော်တော်ထိတ်လန့်စရာပါ။ လူတွေကအဲဒီအတွေးအခေါ်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အဲဒါတွေကိုငါတို့ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
တပ်မက်စိတ်နှင့်တောင့်တ, တစ် ဦး နှလုံးကမ်းခြေမှာရေနစ်သေဆုံး
မျှဝေသည် ? ? ? ? ? ? ? 10:07 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 5, 2018 ရက်တွင် (@spectreburlesque)
ယေဘုယျအားဖြင့် Sheffield ဂီတမြင်ကွင်းကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ
အလိုတော် ဖြေ။ ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ရှီးဖီးလ်မှာအရည်အချင်းအနည်းငယ်ရှိသူမည်သူမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါဟာလူတိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကူညီရန်စိတ်အားထက်သန်ရဲ့အလွန်မြို့များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်အလွန်ရှက်ဖီးလ်ပါပဲ။ ငါတို့အတွက်တကယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ အောင်မြင်တဲ့ဖန်တီးမှုမှန်သမျှကိုလုပ်တယ်။
ဂျက် ဟုတ်တယ်။ ဘာပြောတာလဲ
လုကာ : ငါ Will နှင့်အတူသဘောတူချင်ပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဂီတမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်မဟုတ်အလုံအလောက်သေးငယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေလာပါတယ်။ လူတိုင်းကဒီလောက်ထောက်ခံကြတာဟာအတိအကျတူညီတဲ့အသံမြည်သံတွေမရှိတာကြောင့်အပြိုင်အဆိုင်များမှုသိပ်မရှိပါဘူး။
ဂျက် : မင်းမှာအရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုကကြိုးနဲ့ချည်နှောင်ခြင်း၏တိုးတက်မှုနှင့်ရှက်ဖီးလ်တွင်အလွန်သွေးထွက်သံယိုဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါရုံရုံလူတိုင်းဂီတချစ်ကြတယ်။ လူတိုင်းကအရာရာကိုထောက်ပံ့တယ်။
အလိုတော် ဖြေ။ ။ တီးဝိုင်းတစ်ခုသွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။
အလိုတော် ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဖျော်ဖြေပွဲကတော့ Peddler Market ပါ။
လုကာ : ဒါဟာသေချာပေါက် (ကျနော်တို့သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်အတူ) Peddler နှင့် O2 ဖြစ်ရတယ်။
အလိုတော် : ဒါကစိတ်ကိုမှုတ်နေတာပဲ၊ အရာတွေနောက်ကပြေးသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအသံချဲ့ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏အကြီးမားဆုံးပြပွဲနှင့်ငါတို့က shitting ခဲ့ကြသည်။
လုကာ ဒါဟာငါတို့အတွက်အတော်လေးကောင်းကောင်းထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရှစ်နှစ်နီးပါးလောက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်လုပ်နိုင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့လူအုပ်ကြီးရှိတယ်။
ဂျက် ဖြေ။ ပိုကြီးတဲ့အဆင့်တွေကိုကစားရတာဟာအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာပတ်ပတ်လည်မှာပြေးဖို့နေရာပိုများလာလို့ပါ
လုကာ ဖြေ - ဒါမင်းဟာမင်းဆီကိုပထမဆုံးရောက်လာခဲ့တာပါ။
ဂျက် ဖြေ - ကျွန်တော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးအတားအဆီးတွေ၊ အစဉ်မပြတ်ငါကခုန်ထွက်ပရိသတ်နှင့်အတူကခုန်ရုံသူတို့ကိုပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံ, ထိုသို့အထောက်အပံ့တီးဝိုင်းလုပ်ဖို့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။
သင်လက်ပ်တော့ပ်တွင် Sims များကစားနိူင်သည်
အလိုတော် ဖြေ။ ။ ငါတို့မှာကွဲပြားတဲ့တေးဂီတအရသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။
ဂျက် ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Foals မှ Yannis ကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ သူရဲ့ဂစ်တာလုပ်ငန်းဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စွမ်းဆောင်ရည်အရကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးသည် Talking Heads မှဒေးဗစ် Byrne ဖြစ်သည်။ လုကာဂျွန်အဖြစ်ကောင်းစွာ, jazz, hip-hop သို့, ရဲ့။
အလိုတော် : ကျနော်တို့သူလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးသူနိုင်ဂျီးရီးယားဒစ္စကိုနှင့်ပတ်သက်။ တန်းဂျအပေါ်သွားသောကြောင့်ဤသည်မဟုတ်ဂျွန်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူကအရာရာကို groove နဲ့နှစ်သက်တယ်။
လုကာ : ဒါဟာပူးပေါင်းခြင်းနှင့်အပေးအယူပါပဲ။ သငျသညျအခြားလူများပယ် bouncing နေသည့်အခါကပိုကောင်းနှင့်အခြားလူများကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ကူးများရှိခြင်း။
ဂျက် ဖြေ။ ။ မတူကွဲပြားတဲ့အရာအားလုံးကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးလွှမ်းမိုးမှုယူကြပါတယ်။
လုကာ : သတ္တဝါများ။
ဂျက် ။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ Arctic Monkeys ဟာသူရေးထားတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ ဒါကြောင့်လူရဲ့အလုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်င်နှင့်အတူတကွသူတို့အားဖျူးဖို့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေတာ။
လုကာ ဖြေကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်ဆုံးတီးဝိုင်းတစ်ခုကတော့ Crystal Fighters ပါ။ ၎င်းသည်ပါတီတစ်ခုသာဖြစ်သည်၊ အလွန် မကျေနပ်၍ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။
အလိုတော် ဖြေ - တိုက်ရိုက်ကစားတဲ့အခါအကျိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုကတစ်ယောက်ယောက်ကိုကခုန်တာကိုမြင်တာပါ။ တီးမှုတ်ကြသောလူများသည်အတော်အသင့်ကောင်းပေသည်။ သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုလှည့်စားလိုသောဆန္ဒရှိသည်။ mosh ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
ဂျက် : ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဒုတိယတစ်ခုတည်း Graffiti ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာတကယ်ကောင်းတယ်။
အလိုတော် : ကျနော်တို့ကပြတိုက်မှာကျွမ်းကျင်လာပြီသူတို့နှစ် ဦး တံခါးကိုရုပ်ရှင်ရုံကလပ်အားဖြင့်ခရီးသွားသမိုင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင် ၆ ရက်မှာလွှတ်မယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့အတူတကွရေးသားခဲ့သည်ပထမ ဦး ဆုံးသီချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျက် : ငါကတကယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်, တကယ်ကောင်းစွာချသွားသည်။
လုကာ : ဒါဟာအလွန်မှတ်မိလွယ်တဲ့င်, ငါကကဘာလဲဆိုတာထင်ပါတယ်။
ဂျက် ဖြေ - အဲဒီနောက်သြဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအကုန်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာထုတ်လွှင့်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ live show တွေ၊ အသေးစားခရီးစဉ်တွေအများကြီးရပါတယ်။ ယခုငါ onus ယခုမြို့ပြင်ထုတ်တွန်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ခြင်းဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တာကိုတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လာမယ့်အများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။
Cora Pearl မှပန်းချီကားသည်ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင်ဖြစ်သည်။